कोमी Shoukou को हो - कोमी संचार गर्न सक्दैन - पालना दृश्य
कोमी शौको - कोमी संचार गर्न सक्दैन
एनिम गहिरो नयाँ रिलिजहरू
by Dima 19th नोभेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड कोमी Shoukou को हो - कोमी संचार गर्न सक्दैन
कोमी शौको लोकप्रिय बाट मुख्य पात्र हो एनिमे कोमी संचार गर्न सक्दैन। तर उनको बारेमा केहि अनौठो छ। उनी बोल्न सक्दिनन्। उनी एक शब्द पनि बोल्न सक्दिनन् । त्यसैले को हो कोमी शौको? र एनिमेमा उनले कस्तो भूमिका खेल्छिन्। यस लेखमा हामी उनको चरित्र र उनको भूमिकामा जाँदैछौं एनिमे.
तलको यस लेखको अडियो संस्करण सुन्नुहोस्:
एपिसोड 1 मा उपस्थिति
को पहिलो एपिसोडमा कोमी संचार गर्न सक्दैनन् यसले भनिएको छ कि चरम चिन्ता भएको व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न अविश्वसनीय रूपमा गाह्रो लाग्न सक्छ। कोमीले स्कुलमा आफ्नो पहिलो दिनको सुरुवात धमाकेदारसँग गर्छिन्। कोमीमा सबैको नजर छ र यसको कारण हेर्न धेरै सजिलो छ। उनी अचम्मको रूपमा सुन्दर, सुरुचिपूर्ण र स्मार्ट छिन्। यसका साथै उनी एक निश्चित शीतल प्रकृतिको आभा पनि प्रदर्शन गर्छिन्।
मङ्गामा कोमी शौको
मा एनिमे, कोमी उनी मा कसरी गर्छिन् जस्तो देखिन्छ मंगा। मलाई साँच्चै उसले हेर्ने तरिका मनपर्छ मंगा इमान्दार हुनु पर्दा। रेखाचित्र धेरै विस्तृत र अद्भुत रूपमा कोरिएको छ। हेर्ने चरित्रलाई धेरै रचनात्मक र प्रेरणादायी तरिकामा जीवन दिइएको छ र अवश्य पनि हामी देख्न सक्छौं कि यो विचार कहाँ छ। एनिमे बाट आएको।
Komi मंगा उपस्थिति संचार गर्न सक्दैन
यदि छ भने हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्दैनौं Komi Manga संचार गर्न सक्दैन र कोमी एनिमे संचार गर्न सक्दैन पूर्ण रूपमा समान छन्। तपाईं कहाँ पढ्ने हाम्रो नयाँ लेख हेरेर आफ्नो लागि यो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ Komi Manga संचार गर्न सक्दैन। लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ कोमी किनभने हरेक पटक जब उसले कसैलाई हेर्छ जब उनीहरूले उसलाई प्रश्न सोध्छन् वा उनको ध्यानाकर्षण हुन्छ, उसले उनीहरूलाई धेरै अनिश्चित र डरलाग्दो नजर दिन्छ।
कोमी र ताडानो
उनको नजर एनिममा धेरै पटक हुन्छ र यो सधैं उस्तै तरिकाले समाप्त हुन्छ: या त अरूहरू धेरै डराएर भाग्छन् वा तिनीहरू उच्च इमानदारीका साथ माफी माग्छन्। को लागि सामान्य समस्या हो Shouko तर भाग्यवस, उनी भेटिन् ताडानो हितोहितो, उसको कक्षामा एक मिलनसार विद्यार्थी जो पहिलो पटक उनको नजिक पुग्छ। उसले उसलाई आफ्नो चमक दिन्छ तर भाग्नुको सट्टा उसले बोल्ने प्रयास गर्छ कोमी र उसलाई बुझ्नुहोस्। यसले ब्ल्याकबोर्ड दृश्यमा जान्छ।
ब्ल्याकबोर्डमा Komi र Tadano
ताडानो जब उनले उसलाई आफ्नो अवस्थाको बारेमा बताउँछिन् र उनी बनाउन चाहन्छिन् तब उनको साथी बन्न प्रस्ताव गर्छिन् 100 मित्रहरू. कोमी धेरै खुशी छ कि ताडानो यो प्रस्ताव गर्दछ र खुशीसाथ उहाँलाई धन्यवाद। यसले देखाउँछ कोमी एक राम्रो र दयालु चरित्र हो जसले उसलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्ने मानिसहरूको कदर गर्छ।
तपाईंले उनीसँग अपेक्षा गरेको जस्तो नार्सिसिस्टिक तरिकामा अभिनय गर्नुको सट्टा, उनी आफू को हो भन्ने कुरामा सत्य रहन्छिन् र सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्छिन्। यो एपिसोड5मा सबैभन्दा धेरै देखाइएको छ, जहाँ Shouko एक केटीलाई अस्वीकार गर्नु पर्छ जसले उसलाई पछ्याइरहेको छ र उसको बारेमा पागल छ।
कोमीको पहिलो अन्तरक्रिया
कोमीको मा पहिलो उपस्थिति एनिमे जब उनी स्कूल जान्छिन् सबैले प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन्। उनको पहिलो अन्तर्क्रिया यद्यपि वास्तवमै आउँछ जब उनीसँग कुराकानी सुरु हुन्छ ताडानो ब्ल्याकबोर्ड प्रयोग गर्दै। यसरी तिनीहरू एकअर्कासँग बढी स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्षम हुन्छन् र अवश्य पनि आफ्नो परिचय दिन्छन्।
Komi Shouko संचार गर्न ब्ल्याकबोर्ड प्रयोग गर्दछ
कोमी बोल्नको लागि चकको टुक्रा प्रयोग गर्दछ ताडानो र उनले यो शैली संग गर्छिन्। वास्तवमा पहिलो एपिसोडमा जब उनलाई शिक्षकले आफ्नो परिचय दिन सोध्यो। उनी उठ्छिन् र अनन्तता जस्तो लाग्ने कुराको लागि एक शब्द पनि बोल्दैनन्, त्यसपछि अचानक, उनी बोर्डमा जान्छिन् र छिटो र आश्चर्यजनक रूपमा बोर्डमा आश्चर्यजनक शैलीमा आफ्नो नाम लेख्छिन्।
यसले कक्षामा ठूलो प्रभाव पार्छ र सबै छक्क पर्छन्। यस बिन्दुबाट सबैले पूजा र माया गरेको देखिन्छ कोमी बिना शर्त। र हामी यो फेरि देख्छौं कि उनको वरिपरि एक चरित्र भनिन्छ रेन यामाई, जसलाई मैले एकदमै डरलाग्दो र असहनीय पाएँ।
हामी फेरि कोमीलाई भेट्नेछौं, र तपाईं पनि
Komi Can't Communicate एक धेरै लोकप्रिय एनिमे हो जुन अझै पनि रिलिज हुँदैछ र एपिसोडहरू साप्ताहिक रूपमा रिलीज भइरहेका छन्। हाल एनिमीको हप्ता3मा थिए, अर्को एपिसोड यस हप्ता आउँदैछ। यस कारणले, कोमी संचार गर्न सक्दैनन् हामी आउने अर्को महिनाहरूमा कभर गर्ने एनिमे हुनेछ। पढ्नु भएकोमा धन्यवाद, हामी तपाईंलाई अर्को प्रेषणमा भेट्नेछौं। तलको हाम्रो इमेल सूचीको सदस्यता लिएर तपाइँ हाम्रो ब्लगमा अद्यावधिक रहन सक्नुहुन्छ।
Cradle View Merchandise किन्नुहोस् र साइट लेखकहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्
टैग: कोमी कोमी एनिमे komi anime manga संचार गर्न सक्दैन कोमीले मङ्गालाई सञ्चार गर्न सक्दैन कोमी संचार गर्न सक्दैन कोमी नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स कोमी नयाँ एनिमे
अघिल्लो प्रविष्टि एलिट को कक्षा को व्याख्या
अर्को प्रविष्टि Kuzu No Honkai मा आदर्श एनिम जोडी